I-ALMAR Punta Blonde
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Nadia Ericka
I-ALMAR inkimbinkimbi yamakhabethe amathathu obhishi endaweni ekhethekile nethule "ku-1st Line" woLwandle. Ilungele ukuhlala nophathina wakho noma umndeni. Inethala eliyimfihlo elifakwe izihlalo zamagumbi okuphumula kanye nama-hammocks okuphumula noma ukuthatha isihlwathi ujabulela umoya ohelezayo, umsindo nokubukwa okumangalisayo kolwandle unyaka wonke. Indawo ebiyelwe enepaki lezingane kanye nezitshalo yenza indawo ezungezile ibe yindawo ejabulisayo nephephile. Sinezihlalo zasolwandle, izambulela nokunye okwengeziwe kokuzijabulisa kolwandle.
Ingaphakathi elinethezekile, eliklanywe indawo yenhlalakahle phansi kanye nendawo yokuphumula esitezi esiphezulu esinamakamelo amabili okulala, elilodwa elivulekile elinemibhede emibili eyodwa kanti elinye eliyimfihlo elinombhede wabantu ababili; Banokungenisa komoya okuphambanayo, ifeni yosilingi, isiphephetha-moya esishisayo/ esibandayo, lapho amafasitela abo amakhulu amnyama enza khona isithombe solwandle.
Sengeza kuyo yonke le mininingwane emihle njengezinsipho zemvelo, imidlalo yebhodi nokunye ukuze ujabulele ngokugcwele.
Uzoba nabasebenzi abatholakalayo kunoma yikuphi okwenzekayo.
Ngokuba nemingcele yokufinyelela kwezimoto olwandle, kwenza isiza indawo eyimfihlo, ethulile futhi enelungelo eduze nolwandle, enhliziyweni yePunta Rubia kanye nohambo lwemizuzu eyi-10 ogwini ukuya e-La Pedrera.
Ibungazwe ngu-Nadia Ericka
Ungathembela kusevisi eyengeziwe ekuhlanzeni nasekuwasheni izingubo.
UNadia Ericka Ungumbungazi ovelele